Taliska nabadgalyada wadooyinka gobolka Nugaal oo sheegay in darawalladu qaadan doonaan ruqsadda kaxaynta gaadiidka. – Radio Daljir
Taliska nabadgalyada wadooyinka gobolka Nugaal oo sheegay in darawalladu qaadan doonaan ruqsadda kaxaynta gaadiidka.
Garowe, July 23 – Taliyaha Nabadgalyada wadooyinka gobalka Nugaal ayaa maanta sheegay in aqoonsi loo samayn doono darawalada gadiidka isaga kala goosha waddada xariirisa degaanada Puntland.
Labo xidigle Siciid Xasan Jaamac oo Radio Daljir la hadlay ayaa sheegay in tilaabadaani looga gol-leeyahay inay xakamayso falalka shilalka ah ee inta badan kusoo laab-laabta waddada isku xidha magaalooyinka Puntland, kuwaasi oo sababay khasaro nafeed oo aad u badan.
Taliyaha ayaa si gaar ah uga hadlay khasaaraha ay gaysteen shilalkii baabuur ee bilihii la soo dhaafay ka dhadcay wadad isku xirta magaalada Garoowe iyo degmada Dangoroyo ee Gobolka Nugaal, halkaasi oo ay ku dhinteen dad farbadan oo ka mid ahaa rakaabkii gadiidka saarnaa islamarkaana qaarkood ay hada jiifaan isbitaalka guud ee magaalada Garoowe.
Mudane Siciid Xasan Jaamac waxa uu ku dooday in inta badan shilalka aysan sababin wadada oo xun balse sabab u tahay khibrad xumada wadayaasha gaadiidka iyo taxadar la’aanta.
Arintaani hada lagu guda jiro hadii lagu guulaysto waxa ay gacan ka gaysan doontaa in ay hoos u dhacado khasaaraha badan ee ka dhasha gaadiidka isaga kala goosha degaanada Puntland.
Asbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii shil baabuur oo khaasaaro gaystay uu kadhacay nawaaxiga tuuladda Sin-u-jiif halkaas oo uu ku dhintay hal qof oo ahaa wadahii baabuurka iyo dhaawaca afar kale oo kamid ahaa dadkii rakaabka ahaa.
Siciido Axmed Jaamac ‘Kiin’